Bit By Bit - Introduction - Zvaunofanira kuverenga zvinotevera
Inki blot (chikamu 1.1)
Kuti uwane tsanangudzo yakajeka yebasa reBlumenstock nevamwe vashandi, ona chitsauko 3 chebhuku rino.
Kugamuchirwa kuzera re digital (chikamu 1.2)
Gleick (2011) inopa mhedziso yezvekuchinja kwehutano hwevanhu hwekuunganidza, kuchengeta, kutumira, nekugadzira ruzivo.
Nokuda kwekutsvaga kwezera rejitori rinotarisa pane zvinogona kuipa, zvakadai sekuputsika kwevamwe, ona Abelson, Ledeen, and Lewis (2008) Mayer-Schönberger (2009) . Nokuda kwekutsvaga kwezera re digalog rinotarisa pamikana, ona Mayer-Schönberger and Cukier (2013) .
Nokuda kwemafemu anokonzera kuedza kuita muitiro wenguva dzose, ona Manzi (2012) , uye nezvimwe nezvemafisi ekutevera maitiro munyika, ona Levy and Baracas (2017) .
Dhigirii yemitambo yemakore inogona kuva zvose zvishandiso uye zvinhu zvekudzidza. Somuenzaniso, iwe unogona kushandisa shanduro dzevanhu kuti uone maonero evanhu kana iwe ungada kunzwisisa kunzwisisika kwehuwandu hwemagariro evanhu pamaonero evanhu. Mune imwe nguva, digital digiti inoshumira sechiridzwa chinokubatsira kuita mutsva. Mune rimwe dambudziko, iyo digital system ndiyo chinhu chinodzidza. Kuti uwane zvakawanda pamusoro pekusiyanisa uku, ona Sandvig and Hargittai (2015) .
Ongororo yekugadzira (chikamu 1.3)
Kune zvakawanda pamusoro pekutsvakurudza kwakaitwa mune zvemagariro evanhu, ona King, Keohane, and Verba (1994) , Singleton and Straits (2009) , uye Khan and Fisher (2013) .
Donoho (2015) inotsanangura data yesayenzi semabasa evanhu vanodzidza kubva kune data, uye inopa nhoroondo ye data science, nekutsvaga mavambo emumunda kune vadzidzisi vakadai saTukey, Cleveland, Chambers, uye Breiman.
Kune ruzhinji rwemunhu-wekutanga wehutano pamusoro pekuita tsvakurudzo yevanhu mumakore ekugadzirwa kwema digital, ona Hargittai and Sandvig (2015) .
Nhamba dzebhuku rino (chikamu 1.4)
Nokuda kwekugadzira data yakagadzirira uye yakachengetedzwa, ona Groves (2011) .
Nokuda kwekukundikana kwe "kunyora," ona chitsauko 6 chebhuku rino. Nzira imwe chete iyo Blumenstock nevamwe vashandi vanoshandiswa kupinza hupfumi hwevanhu inogonawo kushandiswa kugadzirisa zvingave zvakakanganisika zveunhu, kusanganisira zvepabonde, maitiro, zvechitendero uye zvematongerwo enyika, uye kushandiswa kwezvinodhaka (Kosinski, Stillwell, and Graepel 2013) .